Kubatanidza Metal neBrazing uye Welding Maitiro Technologies
Kune nzira dzinoverengeka dziripo dzekujoinha simbi, kusanganisira kuwelding, brazing uye soldering. Ndeupi musiyano uripo pakati pesimbi uye brazing? Ndeupi musiyano uripo pakati pekushongedza uye kugadzira? Ngationgororei mutsauko pamwe nekuenzanisa mabhenefiti pamwe neakajairika maficha. Iyi nhaurirano ichawedzera kunzwisisa kwako kwesimbi kujoina uye kukubatsira iwe kuona yakanakisa nzira yekushandisa kwako.
A yakabatana mubatanidzwa inogadzirwa nenzira yakatosiyana zvachose kubva pane yakabatanidzwa. Musiyano wekutanga mukuru uri mukushisa - brazing hainyungudise simbi dzese. Izvi zvinoreva kuti tembiricha yekusimbisa inogara yakadzikira pane mapoinzi esimbi esimbi. Tembiricha dzeBrazing zvakare dzakadzikira zvakanyanya pane tembiricha yekuwelda yesimbi imwe chete, uchishandisa simba shoma.
Kana kusungira kusasanganisa simbi dzesimbi, dzinozvibatanidza sei? Inoshanda nekugadzira chisungo chesimbi pakati penzvimbo yekuzadza simbi nenzvimbo yesimbi mbiri ichibatanidzwa. Nheyo iyo iyo yekuzadza simbi inodhonzwa kuburikidza nemubatanidzwa kugadzira iyi bond ndeye capillary chiito. Mukushanda kwe brazing, iwe unoshandisa kupisa zvakazara kune iyo simbi simbi. Iyo yekuzadza simbi inozounzwa kusangana neaya anopisa zvikamu. Iyo inonyungudika ipapo nekupisa mumidziyo yesimbi uye inodhonzwa necapillary chiito zvachose kuburikidza nekubatana. Aya ndiwo magadzirirwo akabatanidzwa.
MaBrazing maficha anosanganisira emagetsi / emagetsi, eerospace, mota, HVAC / R, kuvaka uye nezvimwe. Mienzaniso inotangira kubva kumhepo yekugadzirisa masisitimu emota kumamota akasimba ejet turbine kune satellite zvikamu zvekushongedza zvakanaka. Brazing inopa mukana wakakura mukushandisa uko kunoda kujoinha simbi dzesimbi dzakasarudzika, kusanganisira mhangura nesimbi pamwe nezvisiri simbi senge tungsten carbide, alumina, graphite nedhaimani.
Kuenzanisa Kubatsira. Chekutanga, chibatanidzwa chakashongedzwa chibatanidzwa chakasimba. Chibatanidzwa chakanyatsogadzirwa chebrazed (senge mubatanidzwa wakasunganidzwa) kazhinji kazhinji chichava chakasimba kana chakasimba kudarika simbi dzinobatanidzwa. Chechipiri, mubatanidzwa unoitwa patembiricha yakadzikira, kubva panosvika 1150 ° F kusvika 1600 ° F (620 ° C kusvika 870 ° C).
Kunyanya kukosha, hwaro hwesimbi hahuna kumbonyungudika. Sezvo simbi dzesimbi dzisati dzanyungudika, dzinogona kuchengetedza zviwanikwa zvemuviri. Iyi hwaro hwesimbi kutendeka hunhu hweese akasunganidzwa majoini, anosanganisira ese ari matete- uye gobvu-chikamu chakabatana. Zvakare, kupisa kwakadzika kunoderedza njodzi yekukanganisa kwesimbi kana kumonyoroka. Funga zvakare, kuti tembiricha dzakaderera dzinoda kupisa kushoma - chakakosha mutengo-kuchengetedza chinhu.
Imwe bhenefiti yakakosha yekushongedza ndiko kureruka kwekujoinha simbi dzakasarudzika uchishandisa flux kana flux-cored / yakavharwa alloys. Kana iwe usingafanirwe kunyungudutsa simbi dzesimbi kuti ubatane nadzo, hazvina basa kana dziine mapoinzi akasiyana akanyungudika. Iwe unogona kusimbisa simbi kune mhangura nyore nyore simbi kune simbi. Welding inyaya yakasiyana nekuti iwe unofanirwa kusungunura iwo hwesimbi simbi kuti uasanganise iwo. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukaedza kusungira mhangura (nzvimbo inonyungudika 1981 ° F / 1083 ° C) kune simbi (nzvimbo yekunyungudika 2500 ° F / 1370 ° C), unofanirwa kushandisa matekiniki ehuremu uye anodhura. Iko kusununguka kwakazara kwekujoinha simbi dzakasarudzika kuburikidza neyakajairwa brazing maitiro zvinoreva kuti iwe unogona kusarudza chero simbi dzakakodzera zvakanyanya kune basa regungano, uchiziva kuti hauzove nedambudziko rekujoinha navo kunyangwe zvasiyana sei mukunyunguduka tembiricha.
Uyewo, a yakabatana mubatanidzwa ine chimiro chakatsetseka, chinoyevedza. Iko kune kuenzanisa kweusiku nehusiku pakati pekidiki, yakashongedzwa fillet yejoinhi ine brazed uye gobvu, isina kuenzana bead yeiyo yakasunganidzwa mubatanidzwa. Hunhu uhwu hwakanyanya kukosha kune majoini pane zvigadzirwa zvevatengi, uko kutaridzika kuchikosha. Mubatanidzwa webrazhi unogona kugara uchishandiswa "sezvazviri," pasina basa rekupedzisa rinodiwa - imwe mari yekuchengetedza.
Brazing inopa imwe yakakosha mukana pamusoro peyakaomeswa mune izvo vashandisi vanogona kuwana hunyanzvi hwekukasira nekukurumidza kupfuura hunyanzvi hwekutengesa. Icho chikonzero chiri mune musiyano uripo pakati pezviitiko zviviri. Chidimbu chakasunganidzwa chakabatana chinofanira kuteverwa pamwe nekuenderana kwakaringana kwekupisa kushanda uye kuiswa kwesimbi yekuzadza. Mubatanidzwa webrazhi, kune rimwe divi, unowanzo "ita wega" kuburikidza nekapillary action. Muchokwadi, chikamu chakakura chehunyanzvi chinobatanidzwa mukushongedza chakadzika midzi mukugadzirwa uye mainjiniya ejoini. Iko kuenzanisa kumhanya kweane hunyanzvi hwekudzidzira oparesheni kwakakosha mutengo chinhu.
Pakupedzisira, simbi brazing zviri nyore kushandisa michina. Hunhu hwebrasingi maitiro - yakafara kupisa manyorerwo uye nyore kwekuzadza simbi kumisikidza - batsira kubvisa zvingangoita zvezvinetso. Kune nzira dzakawanda dzekudziisa mubatanidzwa otomatiki, mafomu mazhinji esimbi yekuzadza simbi uye nzira zhinji dzekuisa kuitira kuti brazing oparesheni igone kugadzirwa nyore nyore kweanenge chero mwero wekugadzira.
KUTENGA KUNOBATSIRA SEI
Welding inobatana nesimbi nekunyungudika uye kuisanganisa pamwe chete, kazhinji nekuwedzera kwesimbi yekuzadza simbi. Iwo majoini anogadzirwa akasimba - kazhinji akasimba sekubatana kwesimbi, kana kutosimba. Kuti ubatanidze simbi, unoshandisa kupisa kwakanyanya kunzvimbo yekubatana. Uku kupisa kunofanirwa kunge kuri kwekupisa kwakanyanya kuti inyungudise simbi dzesimbi (simbi iri kubatanidzwa) uye iyo yekuzadza simbi. Naizvozvo, kupisa kwetembiricha kunotangira panonyungudika simbi dzesimbi.
Welding inowanzo fanirwa kujoina mikuru mikuru uko mativi ese esimbi akaenzana (0.5 ”/12.7mm) uye akabatana pane imwechete poindi. Sezvo bhandi rejoini yakasunganidzwa isingaenzaniswi, haiwanzoshandiswa mune zvigadzirwa zvinoda kujoinha majoini. Zvikumbiro zvinosanganisira zvekufambisa, kuvaka, kugadzira uye kugadzirisa zvitoro. Mienzaniso magungano erobhoti pamwe nekuumbwa kwemidziyo yekumanikidza, mabhiriji, zvivakwa, ndege, makochi enjanji nematraipi, mapaipi nezvimwe.
Kuenzanisa Kubatsira. Nekuti kupisa kwemoto kwakanyanya, inowanzo kuverengerwa uye kunongedzwa; hazvishandi kuishandisa zvakafanana panzvimbo yakafara. Ichi chinhu chakanongedzerwa chine zvazvakanakira. Semuenzaniso, kana iwe uchida kujoina zvidimbu zviviri zvidiki zvesimbi pane imwechete poindi, nzira yemagetsi yekudzivirira simbi inoshanda. Iyi inzira inokurumidza, ine hupfumi yekuita yakasimba, yekusingaperi majoini nemazana nezviuru.
Kana iwo mubatanidzwa uri mutsara kwete pane kunongedzwa, zvakadaro, matambudziko anomuka. Iyo yemunharaunda kupisa kweiyo welding kunogona kuve kwakaipa. Semuenzaniso, kana iwe uchida kubhaisa-simbi zvidimbu zviviri zvesimbi, unotanga nekubvundurudza micheto yesimbi zvidimbu kuti utore nzvimbo yesimbi yekuzadza simbi. Ipapo iwe unowisa, kutanga kudziyisa kumucheto kwenzvimbo yekubatana kusvika pakunyungudika tembiricha, wobva wafambisa zvishoma nezvishoma kupisa pamwe chete netambo yekubatana, uchiisa filler simbi mukuwiriranisa nemoto. Uku ndiko kwakajairika, kwakajairika kuwelding oparesheni. Yakagadzirwa nenzira kwayo, kubatana kwakabatana uku kunenge kwakasimba kunge simbi yakabatana.
Nekudaro, pane zvakakanganisika kune ino mutsara-wekubatanidza-welding nzira. Iwo majoini anoitwa pakakwirira tembiricha - yakakwira zvakakwana kuti isungunuke zvese simbi simbi uye zadza simbi Aya tembiricha yakakwira inogona kukonzeresa matambudziko, kusanganisira kukanganisa kunogoneka uye kumonyoroka kwesimbi yesimbi kana kushushikana kwakatenderedza nzvimbo ye weld. Njodzi idzi ishoma kana simbi dzakabatanidzwa dzakakora, asi dzinogona kuzove matambudziko kana simbi dzedenga dzakatetepa zvikamu. Zvakare, kupisa kwakanyanya kunodhura, nekuti kupisa isimba uye simba rinodhura mari. Iyo yakawanda kupisa iwe yaunofanirwa kugadzira iyo yekubatana, iyo yakawanda iyo iyo mubatanidzwa inodhura kuburitsa.
Zvino, funga otomatiki Welding maitiro. Chii chinoitika kana iwe ukasajoinha kwete imwechete gungano, asi mazana kana zviuru zvemagungano? Welding, nemasikirwo ayo, inounza matambudziko mune otomatiki. Musimbwa-weld mubatanidzwa wakaitwa pane imwechete poindi zviri nyore kushandisa. Nekudaro, kana iyo poindi yaita mutsetse - mutsara wakabatana - kamwe zvakare, mutsetse unofanirwa kuteverwa. Izvo zvinokwanisika kuita otomatiki iyi yekutsvaga mashandiro, kufambisa yakabatana mutsara, semuenzaniso, yapfuura chekupisa chiteshi uye yekudyisa iyo yekuzadza waya otomatiki kubva kune makuru ma spools. Uku kumisikidza uye kwakaomarara setup, zvakadaro, inofanirwa chete kana iwe uine hombe yekumhanyisa kumhanya kwezvikamu zvakafanana.
Ramba uchifunga kuti matekinoroji ekusimbisa anoramba achivandudza. Iwe unogona kusungira pane yekugadzira hwaro kuburikidza nemagetsi danda, kuburitsa capacitor, kukweshera nedzimwe nzira. Aya maitiro akaomesesa anowanzodaidza michina yakasarudzika uye inodhura pamwe neyakaomarara, inodya nguva setups. Funga kana zvichishandiswa kupfupisa kugadzirwa kumhanya, shanduko mukugadziriswa kwegungano kana zvakajairika zuva-kusvika-zuva simbi kujoina zvinodiwa.
Kusarudza iyo Yakarurama Simbi Kubatana Maitiro
Kana iwe uchida majoini ayo ari maviri anogara nekusimba, iwe ungango deredza pasi simbi yako kujoina kutarisisa kune Welding maringe brazing. Welding uye brazing zvese zvinoshandisa kupisa uye kuzadza simbi. Ivo vese vanogona kuitwa pane yekugadzira hwaro. Zvisinei, kufanana kwacho kunogumira ipapo. Ivo vanoshanda zvakasiyana, saka rangarira izvi brazing vs Welding kufunga:
Ukobvu hwesimbi simbi zvikamu
Spot kana mutsara zvido zvinodiwa
Simbi dziri kubatanidzwa
Yekupedzisira gungano huwandu hunodiwa
Dzimwe sarudzo? Zvimakanika zvakasungwa majoini (tambo, yakamisikidzwa kana kumisikidzwa) kazhinji hazvienzane neakasungwa majoini musimba, kuramba kuvhunduka uye kudedera, kana kuvuza-kusimba. Kubatanidza pamwe nekunamatira kunopa mabondoni asingaperi, asi kazhinji, uyezve haigone kupa simba rechisungo chebrazha - chakaenzana kana chikuru kupfuura icho chesimbi yepasi pachavo. Zvakare ivo havagone, sekutonga, kuburitsa majoini ayo anopa kuramba kutembiricha iri pamusoro pe200 ° F (93 ° C). Paunenge uchida zvechigarire, yakasimba simbi-kune-simbi majoini, brazing iri yakasimba contender.
Categories Technologies Tags brazing, kubatana kwekubatana, mashandiro anoita brazing, Welding inoshanda sei, induction brazing simbi, induction jointing simbi, kubatanidza brazing, kubatanidza kutenderera, simbi brazing, simbi brazing hita, simbi induction brazing, simbi Welding, simbi Welding hita, kutengesa Post navigation